LG G6 waa runti naxdin iyo dhibic taleefan adkaysi leh | Androidsis
Guul darrooyinka LG G5, oo ah terminaal nooga tagay dareenno aad u wanaagsan markaan fursad u helnay inaan tijaabino, laakiin taasi kuma dhicin suuqa, waxay ku qasabtay soo-saaraha inuu dib u gurto oo uu dhinac iska dhigo taleefannada gacanta ee diiradda saaraya soo bandhigidda LG G6.
Taleefan gacanta ku haya qayb ka mid ah nuxurka kii ka horreeyay oo leh kamarad run ahaantii layaab leh oo laba-xagal leh iyo a naqshad ka dhigaysa LG G6 taleefan soo jiidasho leh oo aad u adkaysi badan.
1 Naqshadaynta LG G6 waxay siineysaa aaladda astaamo weyn oo saameyn ku yeelashada iyo dhicitaanka ah
2 Astaamaha farsamada qaarkood ee ku sarraysiiya qaybta sare
Naqshadaynta LG G6 waxay siineysaa aaladda astaamo weyn oo saameyn ku yeelashada iyo dhicitaanka ah
LG G6-na maahan kaliya taleefan qurxoon oo leh a aluminium aluminium ah oo siinaya muuqaal aad u sarreeya. Sida laga yaabo inaad ku aragtay fiidiyowga hogaaminaya maqaalka, kooxda naqshadeynta LG waxay ka fikireen wax walba si ay u sameeyaan calankooda cusub miisaanka culus ee heerka sare.
Ka tagida nashqad qaabaysan ayaa ogolaataye LG G6 ayaa aad uga adkaysi badan moodooyinka kale. Kama hadlayo kaliya iska caabin IP 68 kaas oo ka ilaaliya aaladda boodhka iyo biyaha. Laakiin iska caabinta taleefanka laftiisa.
80% dhinaca hore shaashadda ayaa ku jirta, mahadsanid kuwa meertada yar ee taleefanku leeyahay. Laakiin ka warran haddii ay dhulka ku dhacdo? Hagaag, waxay umuuqataa inaad xasilloonaan buuxda sugi karto, marka loo eego wixii aan ku aragnay muuqaalka.
Aluminiumka aluminium ee ku wareegsan xarunta wuxuu hagaajiyaa labada taarikada dhalada ah ee ku wareegsan jirka unibody ee taleefanka. Dhabarka taleefanka, waxaan ka helnaa lakabka Corning Gorilla Glass 5, Dhanka kale nooca hore waa Gorilla Glass 3. Maxaad u adeegsanaysaa nooc hoose oo siinaya iska caabin yar shaashadda?
Haddii aad ogaato, shaashadda LG G6 waxay leedahay cidhifyo xoogaa wareegsan. Nidaamkani wuxuu ka dhigayaa, hal dhinac, mid fudud in meel kasta oo shaashadda ah lagu gaadho hal gacan, waa guul haddii aan tixgelinno 5.7 inji oo ah guddiheeda. Dhinaca kale, geesahan qalooca waxay bixiyaan difaac dheeri ah iyagoo si fiican u dhuuqaya saameynta.
Isla isla waab LG ee MWC 2017 ayaa taleefanka ka soo tuuray joog dhererkiisu yahay hal mitir iyo badh iyada oo aanu waxyeelo gaadhin aaladda, markaa way cadahay in LG G6 uu iska caabbin karo saamaynta iyo hoos u dhaca.
Astaamaha farsamada qaarkood ee ku sarraysiiya qaybta sare
Tusaale LG G6
Nidaamka hawlgalka Android 7.0 Nougat oo leh lakabka LG UX6 qaabeynta
Screen 2880 "Quad HD + 1440 × 5.7 px bandhigay oo leh teknoolojiyadda Dolby Vision HDR10
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 821 Quad Core oo ah 2.35 Ghz
GPU Adreno 530 ilaa 650 Mhz
RAM 4 Abaabul LPDDR4
Kaydinta gudaha 32 / 64Gb moodooyinka leh taageerada MicroSd illaa 2Tb
Kaamirada gadaal Dual 13 Mpx kamarad leh 125º xagal ballaadhan
Kaamirada hore 5 Mpx oo leh 100º xagal ballaadhan
Tilmaamo kale Biyo adkaysi u leh - akhristaha faraha ee dhabarka iyo Kaaliyaha Googe oo loo rakibay si caadi ah - Midabada la heli karo Platinum Mystic White iyo Astral Black
Batariga 3300 Mah
Cabbirada 148.9 71.9 7.9 mm
Layaab la'aan, LG G6 ma aha oo kaliya taleefan qurux badan oo adag, waxay sidoo kale leedahay qalab casri ah oo heer sare ah. In kasta oo aysan ku dhejineynin dahabka taajka Qualcomm, processor-kiisa Snapdragon 821 oo ay weheliso 4 GB oo RAM ah oo taleefanku leeyahay iyo Adreno 530 GPU-da waxay u oggolaan doonaan inay dhaqaajiyaan ciyaar ama codsi kastoo aan loo eegin inta ay le'eg yihiin garaaf garaafyada ay u baahan yihiin.
Maaha in la sheego shaashadeeda. Waxaan horey kuu tusnay mid isbarbardhigga u dhexeeya iPhone 7 Plus iyo LG G6 halkaas oo ay ku cadahay in shaashadda LG G6 ay aad uga fiican tahay tan tartameheeda. Oo yaanan ilaawin kamaradeeda, mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa taasna waxay kugula yaabi doontaa muraayada labadeeda indhood leh taasoo kuu oggolaan doonta inaad soo qaadato sawirro cajiib ah.
Shaki la'aan LG ayaa ku guuleysatay isbadalkan, hada waa inaan aragnaa sida dadweynuhu u soo dhaweynayaan LG G6, telefoon in ayaa suuqa gali doona waqti yar kadib inkasta oo ay dhibic leedahay oo ka dhan ah: xafiiltankiisa weyn, Huawei P10 horeyba waa loo iibiyay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG G6, taleefan runtii iska caabiya
Beta-ka labaad ee Android 7.1.2 wuxuu la yimaadaa war loogu talagalay Nexus 6P iyo Pixel C